Izu ụka a, na-alụ ọgụ Sauron site na Mac | Esi m mac
Na izu ụka a, lụọ Sauron ọgụ na Mac
Ugbu a bụ Fraịde na oge na-eru nso ikwupu nke ọma site na ọrụ nke ọrụ, ọmụmụ ihe, na ezinụlọ. Ma ọ bụrụ na ị hụkwara egwuregwu n'anya ma ị na-achọ ihe ọhụrụ ị ga-eji jupụta ọtụtụ awa na oge ntụrụndụ, nkwupụta ahụ m wetaara gị taa doro anya na ị ga-enwe mmasị na ya.
Etiti ụwa: onyinyo nke Mordor bụ egwuregwu Feral Interactive Games mepụtara ma dabere na saga "Lord of the Rings". Egwuregwu egwuregwu dị na ụwa dị egwu nke Middle-ụwa nke iyi egwu nke Sauron na Mordor na-eyi egwu.
Etiti ụwa: onyinyo nke Mordor
Anyị na-eche ihu ihe, njem na egwuregwu agha ga-enye gị izu ụka zuru oke nke ntụrụndụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ga-ewere njirimara nke Talion, Gordorian si Black Gate bụ onye, ​​mgbe e gbusịrị ya na ezinụlọ ya dum n'otu abalị ahụ Sauron laghachiri Mordor, na-abịa na ndụ na nnukwu akpịrị ịkpọ nkụ maka ịbọ ọbọ ma na-agba mbọ ịchọpụta ihe kpatara eji jụ udo ya ma ọ nwụọ.
Otu n'ime ihe izizi kachasị nke Gordorian nke "Middle-Earth: Shadow of Mordor" bụ na o nwere usoro egwuregwu Nemesis nke onye iro ọ bụla na-eme site na usoro ya mere ọ dị iche maka ọkpụkpọ ọ bụla, site n’ile ha anya na uwe ha rue ike ha, ikike ha, adighi ike ha na ihe ndi ọzọ. N'ihi ya, ndị ọzọ na-dị iche iche ya mere gị gaminggba Cha Cha ahụmahụ ga-abụ ihe pụrụ iche.
"Middle-ụwa: agbọpụta nke Mordor" bụ egwuregwu na elu àgwà ndịna, ụda na mmetụta, Ọ bụ ya mere o ji nwee ibu nke 57,16GB ma chọọ ụfọdụ ọrụ teknụzụ dịka opekempe nke 8GB nke RAM, n'etiti ndị ọzọ. Jide n'aka na ịlele nkọwa tupu ịzụta site na Mac App Store. Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị mee ọsọ ọsọ, ị ka na-ere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » Na izu ụka a, lụọ Sauron ọgụ na Mac
Apple na-arụ ọrụ na mmelite ikpeazụ maka MacOS High Sierra
Ọtụtụ ngwa nwere nsogbu na macOS High Sierra na APFS system